Hatsangana ny “Rafitra Loharano” hiady amin’ny covid-19: mitohy ny « couvre feu » sy ny fihibohana, tsy mbola mianatra ny mpianatra… | NewsMada
Mahareta fa hanana ny soa. Tsy azo nihodivirana ny hirosoana amin’ny 15 andro hamehana ara-pahasalamana miaraka amin’ny fanohizana ireo fepetra samihafa, hiadiana amin’ny covid-19. Hiainga eny ifotony koa anefa izany ady izany manomboka izao.
Nambaran’ny filoham-pirenena ho an’ny firenena sy ny vahoaka malagasy tamin’izany ny fepetra ankapobeny. « Miitatra hatramin’ny 19 avrily ny fikatonan’ny toeram-pianarana rehetra… Mikatona ny toeram-pivavahana rehetra. Voarara avokoa ny famoriam-bahoaka sy ny lanonana na fampisehoana… », hoy izy. Mbola mitohy koa ny tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina.
Nomena hatramin’ny alakamisy ireo hody…
Na izany aza anefa, nojeren’ny fanjakana manokana ireo olona mbola tavela eto Antananarivo na any amin’ny faritra nefa te hamonjy ny toeram-ponenany. Afaka mamonjy ny gara na toeram-piantsonana izy ireo ny talata hatramin’ny alakamisy ho avy izao, manomboka amin’ny 5 ora maraina hatramin’ny 11 ora. Arahina fepetra anefa izany. « Tsy maintsy manao arovava ny rehetra. Ahitana fanasana tanana eny amin’ny gara. Diovina avokoa ny fiara sy ny toeram-pantsonana », hoy ny filoha.
Ankoatra izany, hisy ny sidina anatiny hampitohy an’Antananarivo sy ny any Toliary, Antsiranana, Mahajanga, Morondava, Nosy Be. Voafetra ho ny talata hatramin’ny alakamisy izao ihany izany ary tsy maintsy hatao fitiliana avokoa ireo mpandeha rehetra.
Etsy andaniny, mitohy nyfepetra ho an’ny fairtra telo, ahitana an’Analamanga sy Toamasina I sy II ary Matsiatra Ambony. « Tsy miasa ny taxibrousse sy ny taxibe ary ny taxi. Afaka mifamezivezy ny fiara mitondra entana. Mijanona ao an-trano avokoa ny rehetra afa-tsy ireo manana antony manokana », hoy ihany ny filoha.
Hatsangana isam-pokontany ny rafitra « Loharano »
Nambaran’ny filoha koa fa hanakaiky vahoaka kokoa manomboka izao ny ady hisorohana ny fihanaky ny covid-19 noho ny fifampikasohana. Tsy maintsy mitondra arovava ireo rehetra mivoaka ny trano na eny an-dalambe. Manatona mpitsabo ireo manana soritr’aretina. Hampitomboina ny toerana fanasana tanana ary hisy vaomiera hanampy amin’ny fitliana. HIsy ny paikady vaovao. Hapetraka eny amin’ny fokontany ny rafitra na komitin’ny « loharano », ahitana olona enina tsara sitrapo sy olo-marina na mpitandro filaminana, mpampianatra… « Iarahana mame-tra­ka amin’ny ben’ny Tanàna sy ny sefo distrika izany. Komity hiady amin’ny coronavirus izy io. Hitantana sy handrindra ny fizarana ny vatsy sy fitaovana eny amin’ny fiaraha-monina koa, indrindra ny olana ara-pahasalamana », hoy izy.
Niaiky ny filoha fa sarotra ny fanapahan-kevitra amin’ny fanohizana ny fitokana monina, misy fiantraikany amin’ny isan-tokatrano sy ny fivelomana izany. « Antoka iray hifehezana ny coronavirus anefa izany… Mila faharetana sy misafidy ny lalana haleha isika… Tsapako ny fahasahiranana nefa hanao ny ezaka rehetra hanamaivanana izany ny fitondrana na tsy mora aza izany », hoy izy.